China Ukutywina irabha Seal mveliso kunye nabenzi | Tianzheng
Inkqubo yokuthontelana ikakhulu iquka ukwenziwa kwangaphambili, ukunamatheliswa, ukuqengqeleka kombane kunye nokuphilisa. Emva kokuphilisa, umtya wokuncamathela uya kuwucoca umphezulu we-villi odadayo, emva koko usike kubungakanani obuthile, uwufake kwibhokisi yokupakisha, kwaye ujonge ukugcinwa, ukuhanjiswa okanye ukupakishwa okuthe kratya.
Izinto eziphathekayo EPDM
Ubunzima I-65shore A ukuya kwi-80 yonxweme A
Ukuxinana 1.35g / cm3
Iphakheji Sika kubude obuthile okanye ngokwendlela oyifunayo
Izinto ezikumgangatho ophezulu kunye nokwenziwa.
Uyilo oluninzi onokukhetha kuzo.
Iibhloko zothuli kunye nemozulu.
Ufakelo Easy kunye nokugcinwa.
Inokutshintshwa ukuze ihambelane nesicelo sakho.
Kwiimoto, iirubbers ezihlanganisiweyo zisetyenziselwa iingcango, iifestile zophahla lwelanga. Apha, benza umsebenzi ophindwe kabini: ukutywina umzimba kunye nokuququzelela ukuvulwa kunye nokuvalwa kwemisebenzi ngeqondo eliphantsi lokunyanzelwa. Izibonelelo zobuchwephesha bokuhamba kungachazwa kusetyenziswa umzekelo wefestile esecaleni kwemoto. Ukuhamba kwepaneli yeglasi ngaphezulu kweprofayili yerabha kufuna ukusetyenziswa kwamandla aphezulu. Ngokuhambelana nomthetho wokungqubana, amandla okuxubana alinganiswe apha achazwa njengobungakanani bokungqubana. Kwimeko yeglasi / yerabha, oku kungaphezulu kwe-1. Ukusonga irabha kunokunciphisa ukungavisisani kokungqubana ku-0.25-0.3
Ukuhamba kweprofayili ecacisiweyo kwinkqubo eqhubekayo yeyona ndlela isengqiqweni. Emva kokukhupha, iprofayili icacisiwe kwisitishi se-UHF kunye nejelo lomoya oshushu. Isincamathelisi emva koko sifakwa kumphezulu womhlaba xa sele upholile waya kuma malunga ne-110`C kwaye yarhabaxa. Oku kulandelwa kukuthontelana kwaye emva koko kunyange isincamathelisi malunga ne-170`C kwimizuzu emi-2-3.
Egqithileyo Ukukhuselwa komphetho wokuTywina iziqwenga
Okulandelayo: Umtya weRubber Strip ngeTape yokuNamathela
Ukuhlanganiswa kweRubber Seal